Nhau - Ungasarudze sei yakakodzera yekuisa musoro mhinduro kune epamberi SMT yekuisa michina?
Kana makambani akasarudza michina yekuisa yepamusoro, izvo zvitatu zvinodiwa ndeyekuisa chaiyo kukwirisa, kumhanyisa kumisikidza kumhanyisa, uye kugadzikana kwepamusoro kuve nechokwadi chekumhanyisa-kumhanya uku uchisangana nemazvo kweiyo micro chip chinhu chekuisa.
Kuti uwane zvaunoda kuita, yakakodzera yekuisa musoro scheme (musoro mashandiro) inonyanya kukosha. Chete kana zano iri rakarurama ndipo panogadziriswa mashandiro ekuisa.
Parizvino, pane akawanda akajairwa ekuisa misoro mhinduro: yakagadzika musoro mumwe, yakagadzika musoro wakawanda, kutenderera musoro mumwe uye kutenderera musoro wakawanda. Zvichitaurwa zviri nyore, iwo muchinjikwa musanganiswa wenzira dzekufamba uye huwandu hwekuisa misoro.
Movement maitiro 1: mutsara kufamba
Mhinduro iyi inogona kungoita mitsara ine mutsetse, kazhinji iine robhoti ruoko kana danda kudzora mota kuti iwedzere saizi yekufamba, inova sarudzo inodhura.
Musiyano uripo pakati pemisoro-yemisoro uye imwechete-musoro ndeyekuwedzera iwo mutoro webasa pauniti nguva nekuwedzera huwandu hwekuisa misoro kuzadzisa chinangwa chekuvandudza mashandiro.
Movement mode 2: yakatwasuka mutsara + kutenderera
Mhinduro iyi inogona kuita mutsetse kufamba uye kutenderera kufamba panguva imwe chete, uye kuita shanduko huru muZ axis. Muchiitiko cheiyo yakafanana nhamba yemisoro yekuisa, iri yakawanda-yekuchengetedza nzvimbo pane yakagadziriswa mhinduro, kureruka uremu, kudzikira nekumhanya, uye kukwirira kwakarurama. Inonyanya kukodzera Kurwara kupfupi, yakaderera mutoro, yakanyanya kunyatso shandisa zviitiko.
Pasi pechikero chikuru che "yakatwasuka tambo + kutenderera", mutsauko uripakati pemusoro mumwechete nemusoro wandei wakafanana neyakagadziriswa mhinduro Zvinotaridza kuti zvinongowedzera chete nhamba yemisoro yekuisa, asi zvakare zvinowedzera huremu hwese uye huwandu hwemidziyo. Kuisa kwakawanda Musoro uri kushanda panguva imwe chete.
Mhinduro dzakasiyana dzine masimba adzo, uye makambani anoda kusarudza mhinduro yakakodzera kwazvo zvichienderana nemamiriro chaiwo. Nzwisisa zvakakwana kubva pamatanho akawanda senge mutengo, kurongeka, kumhanya, kugadzikana, nezvimwe, uye sarudza yazvino yakakwana mhinduro. Zvakanakira iwe ndizvo zvakanakisa!